Buyzụta Mee N'onwe Gị Ime Anwansi Watergba Mmiri Na-acha uhie uhie - Freegbọ njem Na-akwụghị ụgwọ & Enweghị |tụ | WoopShop®
Ogologo Afọ: Afọ 5 ~ 7, Afọ 8 ~ 13, Afọ iri na anọ na afọ
Ogologo Ogologo: Grownups
Isiokwu: immụ anụmanụ na Nature
Asambodo: Europe gbaara (CE)
Dọ aka ná ntị: ọ bụghị maka ilo ma ọ bụ ịkpagbu
Pịnye: Watercolor akwụkwọ
Nọmba nlereanya: 6545
Ihe: PVA, calcium carbonate
Ọ na - akwalite imepụta ihe na nnwere onwe na - amụzi ihe ma mekwaa ka nwa gị nwee ike ịkpa ike na nhazi anya.
Mepụta ihe osise gị, fesa mmiri, hapụ ya ka ọ kọọ ma ihe okike gị zuru ezu.
Ọ dị mma maka egwuregwu nọọrọ onwe ha ma ọ bụ nke otu na-enye ihe omume na-atọ ụtọ mgbe emechara ụlọ akwụkwọ nke ụbọchị egwuregwu, ọrụ nne na nna na ụmụaka
Kpụrụkpụrụ akụ ahụ jikọtara na ngwa mmiri maka egwuregwu dị jụụ ma dịkwa mma, ha nwere ike ịrapara na mmiri mgbe akpọtụrụ ha.
Adabaghị maka ụmụaka n'okpuru afọ 3. Nwere akụkụ dị ala na bọọlụ, nke nwere ike ibute ihe egwu.
Ngwaahịa a nwere ezigbo nkọ na isi nkọ. Biko kpachara anya mgbe ị na-eji, emela ihe mmerụ ahụ.
Biko jiri n'okpuru nlekọta ndị okenye.
Dabere na 47 nyocha
afọ ojuju mais manqué un couvercle
Ihe niile dị mma, nwatakịrị ahụ nwere afọ ojuju)
Nwere ike ikwu.